Waxyaabaha kale - Page 3 - Geofumadas
Qalabka KD, kombuyuutarka guga
qalabka KD ayaa bilowday ka 1919, waa in waqti ku filan oo ku dhowaad sano 90 oo si hufan ahaa la alifay ee waalka u qaada, waayo, Ford Model T a ayaa sii a line ballaaran waxaana caan ku filan line xal loo yaqaan GearWrench bixinta ®. Tilmaamahan waxaa si fiican loo yaqaanaa ...
Oktoobar, kooban ee bisha Geofumadas
Waxay ahayd bilo badan oo ah safarro, koorsooyin iyo fasaxyo; Waa kuwan soo koobista gelitaanka 43. geomatics free geomatics II shirka libre, Venezuela Taasi waxay noqon doontaa in III Open Source GIS CAD / GIS dhexdooda mudnaanta Free Software Free Software GIS in OSWC 2008 gvSIG loo soo bandhigi doonaa Latinoware 2008 Ku dhowaad dhammaan ...
Bentley Systems blog ESRI Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah egeomates My SHP
Hotelka ugu wanaagsan Adriatic
Shaki kuma jiro in fasax ku yaala xeebta Talyaaniga ee Adriatic Sea waa waaya-aragnimo aan la ilaawi karin. Markaad raadineyso inaad si wanaagsan uga jawaabto baahida loo qabo isticmaalayaasha kuwaas oo doorta aagga si ay u qaataan wakhti xor ah, Hotel Hotel Special ah ayaa soo baxay fikradda ganacsade dhalinyaro ah oo horey u soo kobcay ...
Leisure / waxyi, dhowr
Casino.de, meel ay ku ciyaaraan internetka
Maanta waxaa jira huuri dhamaystiran oo ah goobo bixiya adeegyo madadaalo oo casino ah, taas oo waxoogaa yar ay xoogaa ka heleen dadka isticmaala marka loo eego casiinada caadiga ah. Kiiska waxaan soo bandhignaa waa xarun casri ah oo loogu talagalay dhiirigelinta noocyada kala duwan ee madadaalada ee internetka, waxaan u jeednaa Casino.de. Sidaas ...
Sida loo helo xogta kaararka kaararka ah
Xaaladaha ayaa laga yaabaa inay ka duwanaan karaan, laakiin badanaa waxay dhacaan in kaarku aanu oggolaaneynin soo dajinta sawirada muujinaya fariin ah in feylku waxyeelo yahay ama laga ilaaliyo qorista. Maanta waxaan ka soo laabtay safarkeyga, waxaan ku qaatay sawirada 130 ee xaafadaha kala duwan ee 4 iyo boodbood! kaarku wuxuu u muuqdaa mid aan la heli karin sidaa daraadeed waxaan isku dayay in aan iibsado ...
Maalinta kubada cagta, waxba kama jiraan GIS
Maanta waa inaad ku raaxaysataa oo aad ku raaxaysato saaxiibbada maalinta labaad ee ciyaaraha CONCACAF ee Koobka Adduunka ee KNNUMX World Cup. Waxaan si dhib tegey inuu soo arko mashruuc in ii hayn karaa mashquul sahan ku saabsan laba maalmaha fasaxa, galabtii caajis leh calaamado roob, gudbanaa ka buuxa Coronas, Barenas, gabdhaha quruxsan la shirts ...
Geofumadas, oo kooban oo kooban
Bishii ayaa dhammaatay, naga tagay qaar ka mid ah dhadhan fiican, inkastoo dhammaantood ahaayeen. Geofumadas Shakhsi Aabahayga wuu ka fariistay booskiisa daa'imka ah, isaga oo iga tagay xusuusta sannadihii 82 ee shirkadda iyo xirtii dhuunta. Ka dib waqti dheer chineando sheygan this waxaan ugu dambeyntii sii daayay koorsada AutoCAD la videos ... sida, waa, ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems ESRI Google Earth GPS GvSIG OS GIS kala cayncayn ah egeomates My
U safarka Bolivia
Ma 6 PM, maalin adag, sababtoo ah waxaan u imid inay subax 4 gurigayga, waxaan joojin ee El Salvador iyo ahay in Lima ka galabta 2, sugaya Duulimaadyadaydii Santa Cruz de la Sierra in kor u kaco habeen 9 ah. Haddii dhammaan tagaa ...
Muxuu naga tagay june?
June ahayd bil ah, taas oo sida aan arkay qora badan faalloonaya, statistics dhacay ... inkastoo shaqsi ahaan waxaan u malaynayaa in sidoo kale saamayn isbedel ah ee server DNS Cartesia.org weli la xaddiday ee matoorada search Google oo waxaan dareemayaa in qaar ka mid ah Ciqaabtu sidoo kale waxay saameyneysaa sababtoo ah shabakadaha bulshada. Sidoo kale ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems blog ESRI Google Earth GIS kala cayncayn ah egeomates My
Saadaalinta Saacadaha 45 ee xiga?
Destinia.com raadinayso barnaamijyo cusub si ay u yaqaaniin php inay ka shaqeeyaan xarunta dhexe ee Madrid maalinta completo.Que waqti shuruudaha dalbanayaan: waayo-aragnimo la xaqiijiyay in code PHP iyo database MySQL, waa in aad haysataa ugu yaraan 2 sano ka shaqeeya it. Waxaa la filayaa in khibradaadu ay noqon doonto mashaariicda cabbir aad u weyn ...
Talooyin loogu talagalay Hispanics oo u safraya USA
fadhiga Friday ee Shirka noqon wax badan oo wanaagsan, waxaan waraystay Richard Zambuni, England waa kan oo ah agaasimaha caalamiga ah ee suuq-geynta ee line geospatial ... ka dibna waxaan u sheegto oo ku saabsan Bentley fekerayo users Hispanic, iyo meesha ay la qeexo khadadka. Waxaan sidoo kale kulan uu la yeeshay Keith Raymond, ...
Fasax lacag la'aan ah ee Baltimore
Waqtiga oo qof kastoo qaata starbuck, waxaan qaatay waqti aan ku baxo oo aan raadsado hadiyado qoys, waa inaan ku qiraa in khariidadaha Google ay u fiican yihiin tan, ma fahmin fahamka wadooyinka basaska sidaa daraadeed waxaan jeclaa inaan ku socdo socodka , oo aan ka badnayn xaafadaha 5 ee ku wareegsan ...
Cristóbal Colón version 2008
Buugaagteena taariikhiga ah ayaa inoo sheegayaa in Christopher Columbus uu ka tagay Caddiz (Safarka Afraad) si uu u raadiyo Bariga Hindiya, waana sidaasi oo uu ku ogaadey qaarada Ameerika (uu gaadhay dhul weyn). Waqtigaas, ma jirin dalxiisyo dalxiis, qorshe safar, iyo xitaa gundhigga gundhigga waxa ku jira wax yar ...
Maalinta Happy Earth, blogs 10
Maanta April 22 ka 1969 soo baxay hindisaha si ay ugu dabaal maalin sharaf of dhulka, meesha aan ku nool nahay, halkaas oo aannu u cunno, iyo meesha caruurta ku nool doonaa haddii aan wax samayn iyada daawashada. initiative waxaa loo qabtaa sanad kasta, oo doonaya in ay kor u qaadaan alaabtii sharci-dejinta ee heerka of dalalka, gobollada iyo qaaradaha ...
7 yaababka dabiiciga ah Maxaa dhaartii dhacday?
Thanks to adkeysi ee Rebeca taageere oo aan on this page maado oo ka mid ah yaabab dabiiciga ah waxaan ogaaday in ee abid ka dhaca wax la yaab leh, oo sida muuqata ayaa la tirtirayaa qaar ka mid ah kuwaas oo si fiican u taagan, waxaana ay si lama filaan ah ka dhex muuqday tobankii ka mid ah kuwo kor u kacay ...
Dib uhabeyn Deyn
Shirkadaha caalamiga ah ee yaryar ayaa yaraaday suuqa deynta guryaha waddamada bangiyada yar yar haystaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ee bangiyada caalamiga ah waa dib-u-maalgelinta (dib u bixinta Ingiriisiga) ee amaahda; bal aynu eegno waxa ay raadinayaan iyo faa'iidooyinka jira. 1 Waxay raadinayaan inay nadiifiyaan sanduuqa macaamiisha Tani ...
Maareynta Meelmarinta Mashaariicda Magaalooyinka
Waxaa lagu qaban doonaa Asunción, Paraguay laga bilaabo 13 illaa 18 ee July ee 2008 waxaana sare u qaadaya Machadka Lincoln ee Siyaasadaha Daljirta, iyadoo sii socota koorasyada la soo jeediyey sanadkan; dhowaan, mid ayaa lagu qabtay magaalada Guatemala, maalmaha soo socda waxaan si rasmi ah u shaacin doonaa mid ka mid ah Jaamacada oo kaashanaya Honduras ...